Spyderco - eyaziwa inkampani American wahlanganyela womshini alo imimese. Umi ngo-1978, ngaphambi ukubukeka inkampani ummese lokuqala yakhe iminyaka emithathu eyingoduso e izesekeli imimese. Vele imimese alo Spayderko waqala nomlando wayo kuphela ngo-1981, lapho izwe wabona wokuqala wabo - C01 Worker. Cishe ngokuphazima kweso, inkampani isibe owaziwa, futhi imikhiqizo yayo ethandwa kakhulu. Kusukela ngaleso sikhathi, iminyaka engamashumi amathathu lokhu ukuthandwa kuphela sakhula, futhi manje ungakwazi ukuthola lo muntu ojwayelene kahle ummese kancane ukuthi ababengalazi Spayderko imimese.
Isizathu waziwa futhi imikhiqizo yayo marketing ngokuyinhloko abanekhono, nemikhiqizo high nemibono emisha okuqhubekayo. Zonke lezi zimfanelo zihlobe- futhi umphelelisi nomunye. Ngakho, imbobo ezibonakala banal e ikhaba (zazo manje ufunde Spayderko imimese), hhayi ukuthi abanye, njengoba wuphawu lokuhweba! Futhi isicelo lesi sinqumo ngomunye nomkhiqizi Kwakuyohlanganisani ukukhokha amaholo for ukusetshenziswa patent okuqinile kanye lokuhweba. Ekuqaleni ukukhiqizwa kwahlelwa Japan, empeleni kwenza imimese kuqala. amakhosi Japanese - esingcono kunazo zonke izinga blade. Kodwa ngo-1990, izinkinga ababa nazo izinga ungakhululekile yen-dollar ophoqelelwe inkampani ukuhlehlisa inhlangano womshini imimese izibambo wabayisa-United States.
Ekhuluma imimese Spayderko, kufanele ngaso sonke isikhathi usebenzise umqondo wegama elithi "omusha", "kuqala", "engenakulinganiswa". Ngempela, abaningi amasu design ezivamile manje noma izixazululo technical kwabikwa kuqala ezikhishwe ke enkulu ekwakhekeni ngemicu inkampani. Ngokwesibonelo, elola serreytornaya Spayderko abakaze elisetshenziswa alo imimese. Selu Glesseru, umsunguli wenkampani, wathatha isikhathi esingaphezu konyaka ukufeza zamukelwa yonke indawo imimese yayo kanye iphrofayli yezinkampani, lobunikazi okuyiwona etholwe kuphela ngo-1990.
Ubuchwepheshe Isicelo powder yokusansimbi ekulondolozeni Izinga eliphakeme imikhiqizo kanye nokwazi indlela yokwenza izinto Spyderco. Lokhu kwenza ukuba inkampani ukukhiqiza umfuziselo akubizi ukusonga imimese enezimfanelo umthengi wezinga eliphakeme kakhulu. Kodwa hhayi kuphela ngemicu nomkhiqizi American iye alalelwa, ngoba isibambo futhi ukusonga ezosetshenziswa alo ummese kubaluleke okwedlula labo inkemba. Lapha, izinto ezintsha, izibambo ergonomic, indlela Cabangisisa kwenza imimese Spayderko esezingeni izinga yesimanje ukusonga ummese. Manje ngisho wahlangana ephaketheni ummese isiqeshana lokunamathiselwe zokugqoka noma ibhande - kungcono kakhulu okusungulile Spyderco.
Ngokwengxenye enkulu ukusonga ummese, ngomqondo ayo esimanje, yingenxa lokhu inkampani American uye savela esibayeni ibe real umzingeli ithuluzi, izivakashi, isosha noma umuntu ofuna ukuba balungele yini njalo. Kuvele isici esibalulekile imikhiqizo Spyderco - yokudlanga ngentengo ephansi. Manje wonke umuntu angabona ngokwabo okusezingeni eliphezulu umthengi izimfanelo kwalezi imimese alo futhi uthenge wena ebusweni babo umsizi okuthembekile. Ezweni lethu, banikela iyiphi sina ummese esitolo. Moscow, isibonelo, inikeza ithuba ukuthenga izikhali zabo kakhulu noma okukhethekile ezitolo.